बदलापुर, शिकारपुर र जनकपुर - नेपालिक्स
प्रभाव नै पार्दैन, पार्नु पनि कसरी? कलमसँगै जन आवाज बुलंद नभएसम्म बदलापुरमा हिंसा भड़किरहने हो। एकआपसमा मारकाट भैरहने हो। बेला मौका भिड भडके पछि अधिकार खोज्ने र फेरी शिकारीको संगतमा आएर शिथिल भएपछि विकासमॉर्फत समृद्धिको नारा लगाउँदै भाई भारदार खोज्ने हो।
बदलापुरमा शिकार हुनेहरू अरू कोही हुने होइन, उनि त्यही हुन जो शिकारपुरे हुन। जो सजिलै कसैलाईं भगवान र कसैलाईं शैतानको दर्जा दिन पछि पर्दैन्न। मुक्तिका नाटक गरेर शिकारीसँग संगत खोज्छन र संगत भएपछि मौन भएर हिंसक बन्छन।
जसलाई दृष्टिभ्रम छ। जो सजिलै घरफोड़न मरिहत्ते गर्छन र विभिन्न नाममा सहजै बाँडिन्छन। शिकारू भन्दा तलको श्रेणीहरूमा पर्ने नै हुन शिकारपुरमा रहेका शिकारीका असली शिकारहरू। जसको बली आगन्तुक शिकारीलाई खुसी पार्न, लाभको निम्त्ति र उनको श्रीसम्पति जोडन चढ़ाइन्छ। उनि त्यो हुन जो शिकारिको शिकार र मानवताको लागि धिक्कार छन। जसले कुट्टीलाई जातमा बाँडेका छन। जसले मन्दिरलाई कब्जामा राखेका छन। जो अन्याय हेर्दै कि त पछि भागेका छन अथवा अघि जागेका छन। जसले गलतसँग हात मिलाउन इंकार गर्छन्।
शिकारहरू प्रशस्त छन, अर्थात शिकार रहेसम्म शिकारी आइरहने छन। शिकारी आउँदा शिकारपुरकै केहिलाई शिकारू बनाएर शिकार खेलिरहने छन। शिकारी शिकारमा निस्कनु पूर्वका तयारी शिकारपुर पुग्नु पूर्व नै गरिहाल्ने पुरानो सूत्रलाई फरक परेको छैन।
शिकारू तयार पार्ने, उनि सँग समन्वय गर्ने, उनलाई सूचक बनाउने, घुसपैठ गराउने…इत्यादि। शिकारलाई अन्य शिकारीसमेतसँग तालमेल गरि समयमै बाँडने सीमितता रहन्छ। शिकार आजकल अलिक लचिलो गरिएको छ। शिकारू समेतलाई शिकार मारी हुने भोजमा निम्तो तथा शिकारमा सामेल गराईने र शिकारूलाई शिकारीको बिल्ला लगाई दिने चलन छ।
शिकारपुरलाई विश्वासमा लिइएको पुष्टि गर्न हेतु पनि शिकारूलाई बिल्ला र शिकारमा एकरूपता न राखी शिकार बदलिने नीति छ। शिकार खोज्ने शिकारमार्गहरू प्रशस्त छन। शिकार खोजिदिने शिकारूहरू आपसेआप तयार हुने हुनाले खास कठिनाईको सामना गर्नु नपर्ने अवस्था छ।
पछिल्ला डेढ़ दशकमा शिकारपुर ‘स्प्लिट डिजोर्डर’को शिकार समेत हुनु परेको छ। त्यसै कारण हो शिकारपुर कहिले बदलापुर, त कहिले शिकारपुर बीचको पहिचानको तालमेल झमेलामा उसको अंतिम नाम के रहने, शिकारपुर अथवा बदलापुर, भन्ने किटान विफल हुँदै आएको छ। हुनत: आगामी समय र कर्मले सो काम गर्लां! तर शिकार पुरवाला पहिचान होस वा बदलापुरवाला… दुबैमा शिकार भेटन शिकारीलाई दुःख भएन। बरू यहाँबाट विदा लिएर जाँदा शिकारपुरी जनता होस अथवा बदलापुरी जनता… बैंडबाजा बजाएर स्वागत, जयजयकार र माईबाप भन्नेसम्म र मान्ने सम्मको भिड यहीँ छ।
शिकारूहरू जुन दिन शिकारी भएको अनुभूति गर्न खोज्छन, आगन्तुक शिकारीद्वारा शिकार गरिन्छन। र शिकारपुर दिन, हप्ता, महिनासम्म बदलापुर बन्ने गर्छ। र अंततः फेरि शिकारपुर!
तर आज जतिको सजिलो उहिले थिएन, त्रेतायुगको कुरो हो। आज बदला-शिकार-बदला-शिकारको बीचमा हल्लीरहेको यो पुरको वास्तविक नाउँ र पहिचान पनि जनकपुरधाम नै थियो।
त्यो बेला रहेको यसको नाम जनकपुरधाम परिवर्तन भएर शुरुमा शिकार पुर भयो र अहीले शिकार र बदला पुर, दुबैतीर हल्लीने भएको छ।
जतिखेर भूदेवीपुत्री सीता र जनकपुरका अनन्त प्रतापी राजा जनकको बसोबास थियो। वास्तववमा उत्तिखेर यो ठाउँ जनकपुरधामको नामले सुप्रसिद्ध रहेको थियो। अहिले त नाममात्र जनकपुर रहे तापनि काम भनेको शिकार र बदला बीच हल्लीएको छ। हुनत: समस्त मधेसको अवस्था नै यस्तो छ।
Tags: #बदलापुर, #रजनकपुर, #शिकारपुर
Previous जिउँदोसम्म एक छाक होइन, मरेपछि किरिया खर्च
Next जसले आफ्नो मूल्य तोक्यो उसको सन्ततिले भोग्यो, जनकपुर अपवाद होइन